मन्त्रीलाई थाहै नदिई क्याबिनेटको निर्णयमा कीर्ते ! | Nepal123.com
Author: arun Published Date: April 2, 2020 LeaveaComment on मन्त्रीलाई थाहै नदिई क्याबिनेटको निर्णयमा कीर्ते !
२० चैत, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बिहीबार कोरोना रोकथामसम्बन्धी उच्च स्तरीय समितिको बैठक बस्यो । बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरुवीच स्वास्थ्य सामग्री कुन प्रक्रियाबाट खरीद गर्ने भन्नेमा विवाद भयो ।
मन्त्री खतिवडाले जीटुजीको प्रयास यसअघि पनि गरिएको जानकारी दिँदै भने, ‘हामीले छिमेकी मुलुकसँग स्वास्थ्य सामग्री हामीलाई यो यो चाहियो, सहयोग गर्नुहोस् भनेर पठाएका पनि हौं । तर, दुईटै छिमेकी मुलुकहरु आफैं समस्यामा पनि भएका कारणले हामीले आजसम्म पनि खरीद गर्&#
← गुजारा चलाउन गाह्रो भएकाको विवरण संकलन शुरु
नि:शुल्क खाद्य सामग्री वितरण अभियान-५ →